Soo dhowow, mucaarad yar! Xiddiga Pauley Perrette ee 'NCIS' ayaa ku soo laabtay CBS si taxane cusub - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Soo dhowow, mucaarad yar! Pauley Perrette star of 'NCIS' waxay ku noqotaa CBS si taxane ah
Soo dhowow, mucaarad yar! Pauley Perrette star of 'NCIS' waxay ku noqotaa CBS si taxane ah
Qaar ka mid ah jilayaasha telefishinka ayaa noqda mid dhab ah oo ku saabsan caadifadeena. Waan oohin marka ay baxaan, waanu ku faraxsannahay marka ay soo noqdaan. Pauley Perrette hubaal waa mid ka mid ah jilayaasha. Laakiin ha ka welwelin, farriintiisu hadda waa laga joojiyay!
Posted by FANPAGE ONLY (@theonechicagoncis) on Mar 4, 2019 at 2: 54pm PST
Sannadkii hore, jilaa jilicsan ayaa ku farxay NCIS on CBS ka dib xilliyada 15 iyo 288 dhacdooyinka. Waxay cayaartay doorka dhalinyarada da 'yarta Abigail' Abby 'Sciuto. Dhacdadii ugu dambaysay ee ay ka muuqatay, waxaa jiray hadalkii ay ka tagtay kooxda. Mid ka mid ah lahaa lahaa lahaa iyada oo leh:
Ma wanaagsana wanaag. Waana farxad hadda.
Ma wanaagsana wanaag, hadda uun.
Soo dir PauleyPerretteFan (@pauleyperrettefan) on May 6, 2018 at 10: 46am Magaadle
Soo dhowow, mucaarad yar!
Dhawaan, Perrette ayaa ku soo laalay xiga doorka taasina waxay calaamad u noqon doontaa inuu dib ugu laabto CBS. Ka dib markii ay ka baxday geedi socodkii dheeraa, waxay u baahnaatay bilow cusub waxayna heshay! Sida laga soo xigtay majaladda Dharka, Perrette waxay ka shaqeyn doontaa xiddigaha Joo ah Virgin, Jaime Camil, oo ah majaajilada cusub jejebiyey.
Soo dir PauleyPerretteFan (@pauleyperrettefan) on Feb 28, 2019 at 12: 56pm PST
Taxanaha waxaa qoray Alex Herschlag oo uu heystaa soo saaraha fulinta Jennie Snyder Urman. Goobta waxaa lagu dhajin doonaa cunuga si qarsoodi ah hodan (uu ciyaaray Camil) oo aabbihiis isaga tagay. Kadib wuxuu la degay xaaskiisa iyada oo gabadha walaasheed Reseda ah (oo uu ku ciyaaro Pauley). Waxyaabaha qosolka leh waa marka haweenku ay ku qasbi doonaan walaalka iyo walaashii inay isku xiraan. Wax xiiso leh, maya?
Imaanshaha soon ... aniga iyo @jaimecamil 🙂 jacaylka jacaylka jacaylka !!!! pic.twitter.com/4RJjMAOPBX
- Pauley Perrette (@PauleyP) March 7, 2019
Imaanshaha soon ... aniga iyo @jaimecamil 🙂 jecel jacaylka !!!! pic.twitter.com/4RJjMAOPBX - Pauley Perrette (@PauleyP) Maarso 7, 2019
Taageerayaasha waa ay ku faraxsan yihiin
Netizens ayaa muujinaya boggooda Twitter-ka sida ay wararkaan uga farxinayaan. Akhri sida ay uga jawaabayaan oo ay ku faafinayaan ereyga.
'NCIS' Alum Pauley Perrette waxay ku soo noqotaa TV-ga CBS Broke https://t.co/aPeCyPpqtO pic.twitter.com/Xj9m2F9asb
- # HalkeeBeef? WAA MAXAY CAALAMI AH? NothingBurger (@patckat) March 7, 2019
Pauley Perrette actress 'NCIS' waxay ku noqotaa TV-ga CBS ee 'Broke'
- Sarah J 'St ☆ r' M (@SarahSaerynade) March 7, 2019
- Stephanie Meza (@pinkbettyp) March 6, 2019
Miyay rajeyneysaa inaad aragto taxanahan cusub? La wadaag farxaddaada nala soo xiriir!
Cuntada hore ee loo yaqaan - NYT Cuisine - New York Times